Doorashada Uganda 2021: Museveni oo hoggaanka u haya codadka la tiriyay | Berberanews.com
Home WARARKA Doorashada Uganda 2021: Museveni oo hoggaanka u haya codadka la tiriyay
Yuganda-(Berberanews)-Madaxweynaha mudada dheer xilka dalkaUganda Yoweri Museveni ayaa hogaaminaya tartanka madaxtinimada ka dib codbixintii Khamiistii dalkaasi ka dhacday, sida natiijooyinka hordhaca ah ay muujinayaan.
Guddiga doorashada ee dalkaasi ayaa meesha ka saaray eedeymaha ku saabsan wax isdabamarinta codadka, oo uu soo jeediyay murashaxa mucaaradka Bobi Wine, oo ah fanaan isu badalay siyaasi.
Laakiin kormeerayaasha doorashada ayaa sheegaya in kalsoonida tirinta ay waxyeelo u geysatay khadka internet-ka oo dalkaasi ka go’an seddexdii maalmood u dambeeyay.
Natiijada kama dambeysta ah ayaa lagu wadaa in la shaaciyo maanta oo sabti ah.
Tiro dad ah ayaa la dilay intii ay socdeen ololaha doorashada oo rabshado u dhexeeya booliska iyo taagerayasha mucaaradka.
Sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka waxay dowlada ku eedeeyeen in ay dhibaateyneyso.
Madaxweyne Museveni, oo xukunka hayey 35 sano, ayaa rajeynaya in mar lixaad loo doorto xilka.
Robert Kyagulanyi, oo caan ku ah magaca Bobi Wine, ayaa sheegay inuu matalayo dhallinyarada dalka, halka Yoweri Museveni, oo 76 sano jir ah, uu ku ololeyanaya inuu dalka Uganda u horseeday xasillooni.
Jimcihii, markii ay natiijada iska soo daba dhacaysay, Bobi Wine wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay isku gadaameen gurigiisa oo ay jabiyeen.
”Midkoodna nimankaan soo xadgudbay ee Militariga ah nalama hadlayo, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka, Waxaan ku jirnaa dhibaato culus”.
Laakiin afhayeen u hadlay dowladda ayaa ku eedeeyay inuu “riwaayad” ka sameeyay dhacdadaasi “si uu u raadsado naxariis”. “Bobi Wine xilligan waa shaqsi aad muhiim u ah. Waa waajib saaran dowladda Uganda inay hubiso inuu nabad qabo,” ayuu yiri Don Wanyama.
Sida guddiga doorashada shaaciyay natiijooyinka hordhaca ah ee laga helay saddex meelood labo meelood oo ka mid ah goobaha codbixinta, Mr Museveni ayaa ilaa iyo hadda ku guuleystay 62% codadka marka loo eego Bobi Wine oo helay 30%.
Madaxa guddiga doorashada Simon Byabakama ayaa sheegay in codbixinta ay u dhacday si nabad ah, wuxuuna ugu baaqay Bobi Wine, oo sheegay in qaar ka mid ah wakiiladiisii doorashada la xiray khamiistii, ay soo bandhigaan cadeymaha eedeymaha musuqmaasuqa ah ee loo haysto.
Previous articleUganda’s Museveni Declared Winner of Presidential Poll, Rival Alleges Fraud
Next articleGabadhii xijaabnayd oo ka fadhiisatay xayaysiiska